China Hot ire magburu onwe mmiri ọgwụ ọchụ windproof mum na-ehi ụra akpa maka agha dinta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta | Xueruisha
A na-ahazi akpa ndị a na-ehi ụra dijitalụ maka ndị agha, ndị na-eme nchọpụta, ndị na-achụ nta na ndị na-akwado ndị agha. E nwere ụdị agba dị iche iche maka nhọrọ, nke nwere ike ịdị mma n'ọtụtụ ala dị iche iche, dị ka oke ọhịa, ọhịa, ugwu wdg. Ejiri 20D 380T Nylon akwa ndị a, nke na-enweghị ikuku, mmiri na-asọ oyi, nkwụsị-nkwụsị, nnukwu ọkụ na ụfọdụ ndị ọzọ magburu onwe arụmọrụ. Dị ka anyị niile maara, na-emekarị, gburugburu ebe obibi nke njem n'èzí dị oyi na mmiri, n'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa na a na-edozi akwa shei ọgwụgwọ DWR (Durable Water Repellent), nke nwere ike ichebe akpa ụra gị site na mmiri na oke. Anyị nwere ike hazie agba, ihe, ụdị, nha wdg, dabere na arịrịọ gị. Nke a na-ehi ụra akpa jupụtara 1200g 90% ọbọgwụ ala, ọtụtụ ụlọ mmepụta ihe na-eji 85% ọbọgwụ ala ma ọ bụ 80% ọbọgwụ ala, nwere ike ịbụ ala 80%, ma anyị na-esi ọnwụ iji 90% ọbọgwụ ala na a elu jupụta Power nke 650+, nke nwere ike ime ka ọ dị ezigbo ọkụ ọbụlagodi ebe oyi. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ mba ndị dị na Europe na n'Ebe Ugwu America abanyela aka na anyị, na-akpọ anyị òkù inye aka n'iwepụta ngwá agha. Ihe ndị siri ike ndị agha chọrọ na ngwaahịa na-egosi na anyị nwere ikike ọkachamara zuru oke, na-eji oke mma dị elu na-ejuputa ihe na akwa dị iche iche dị elu. Iji hụ na ngwaahịa a dị mma, ọ bụrụ na ịnwere ihe achọrọ maka akpa ihi ụra na gburugburu ebe obibi ọkachamara, anyị nwere ike izute arịrịọ gị. Anyị maara ya nke ọma na ndị ahịa dị iche iche nwere mkpa dị iche iche, anyị ga-anwa ike anyị niile iji gboo mkpa gị. Anyị nwere ike ịnye ụdị ọrụ OEM & ODM maka gị na ndị ahịa gị, n'ihi ụlọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 20 na ụlọ ọrụ a. N'ikwu eziokwu, anyị maara ihe ị chọrọ ma mee ka ọ mee.
Kedu otu esi ahọrọ akpa ụra?
1. Họrọ akpa ihi ụra dị ka ọnụ ọgụgụ gị: obere akpa ihi ụra ga-adị oke aka ka ị gbanwee ma ghara iru ala; akpa ihi ụra buru ibu ga-emetụta njigide nke ịhụnanya ma ọ bụrụ na ha adịghị efu.
2. Lezienụ anya na ọnọdụ okpomọkụ nke akpa ụra: oge ​​niile, data kachasị mkpa nke nhọrọ akpa ihi ụra bụ ọnọdụ okpomọkụ. A na-ekewa ọnọdụ okpomọkụ na data atọ: njedebe oke okpomọkụ (ya bụ, ọnụ ọgụgụ kachasị dị ala, na-eji ogwe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ), nkasi obi ọkụ (a na-ekekwa ọnọdụ okpomọkụ a n'ọtụtụ dị elu ma dị ala site na ụfọdụ ndị nrụpụta, na-eji bluu na oroma Ogwe okpomọkụ), na oke okpomọkụ (na-eji uhie uhie).
Nke gara aga: 2020 emeputa elu 90% ala jupụtara ihi ụra akpa na asọmpi price
Osote: Izu mkpuchi shei mmiri na-ekpuchi obere ihi ụra maka ihu igwe oyi